Shariif Xasan oo fariin deg-deg u diray dowladda uu hoggaamiyo madaxweyne Farmaajo - Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Shariif Xasan oo fariin deg-deg u diray dowladda uu hoggaamiyo madaxweyne Farmaajo
Madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Soomaaiya Shariif Xasan Sheekh Aadan ayaa ka codsaday dowladda federaalka Soomaaliya inay kala shaqeeyso maamulkooda sidii loo furi lahaa dhammaan waddooyin u xiran Al-shabaab, gaar ahaan kuwa Baay iyo Bakool.
Shariif Xasan ayaa sheegay in nasiib darro ay tahay in Al-shabaab ay si raaxo badan isaga kala gooshaan guud ahaan gobollada dalka, halka iyagii oo dowladda ahaa, haystayna ciidamo badan ay diyaarado aamineen.
“Dowladda waxaan ugu baaqayaa iney nagala shaqeeyaan sidii loo furi lahaa dhammaan waddooyinka ay xireen Al-shabaab, mar walbo si raaxo badan ayeey ku maraan iyaga oo tiro yar ah, annagii oo haysannay ciidamada, kuwa AMISOM iyo caalamkana waan ka baqeynaa oo diyaarad baan aaminnay” Sidaas waxaa yiri madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya Shariif Xasan Sheekh Aadan.
Shariif Xasan Sheekh Aadan ayaa dhanka kale sheegay in haddii awoodda dowladda Soomaaliya la isugu geeyo waddooyinkaan u xiran Al-shabaab iney aad u sahlanaaneyso inay hantaan guud ahaan amniga dalka iyo waddooyinka.
Dagaalyahanadda Al-shabaab ayaa kala jaray isku socodkii gobollada Baay iyo Bakool, waxay gebi ahaan go’doomiyeen degmooyinka qaar, mana jirto cid ka tirsan dowladda Soomaaliya oo ku dhiiran karta in waddooyinkaasi ay maraan.